उपेन्द्रले बैठक बोलाएपछि महन्थलेकिन जनाए आपत्ति, बाबुरामले के गर्छन ? — Imandarmedia.com
उपेन्द्रले बैठक बोलाएपछि महन्थलेकिन जनाए आपत्ति, बाबुरामले के गर्छन ?
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र विवाद चर्किरहेको बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठक बोलाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आपत्ति जनाएका छन् । ठाकुरले एक विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले कुनै आधिकारिक बैठक नबोलाइएको भन्दै यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आजै दिनको १ बजेबाट पार्टी कार्यालयमा जारी रहेको भनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट एवम् सामाजिक सञ्जालबाट सूचना एवम् समाचारहरु सम्प्रेषित भैरहेको प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको कुनै बैठक नडाकिएको र त्यसो जानकारी समेत हामीलाई नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट गरिन्छ ।’
पार्टीभित्रको विवादका बीच यादवले आफू निकटका सांसद तथा कार्यकारिणी समिति सदस्यको बैठक बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् । सत्ता समीकरणका लागि पार्टीमा भएका विभिन्न गतिविधि, संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोको चयन लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।
जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवको बहुमत रहेको छ । सोही बहुमतको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशको सरकारलाई सहयोग गरेका चारजना सांसदलाई कारवाही गरिएको थियो ।
यादव पक्षका नेताको दावी अनुसार संसदीय दलमा पनि उपेन्द्र यादवको बहुमत रहेको छ । सोही बहुमतका आधारमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने निर्णय यादव समूहको थियो ।
तर पछिल्लो समय जसपा नेपालका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले १९ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका थिए । र सोही हस्ताक्षरको आधारमा राजेन्द्र महतो संसदीय दलका नेता बनेका हुन् । तर चारजना सांसदले दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैले संसदीय दलको बहुमत कसको पक्षमा छ भने कुरा छुट्याउन गाह्रो रहेको बताइन्छ ।
यस्तै राष्ट्रियसभा उपचुनावमा राप्रपाले नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई समर्थन गर्ने भएका छन् । शीर्ष नेताहरुबीच शनिबार भएको छलफलमा अध्ष्क्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा उपचुनावमा सहयोग मागेको जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य पद खोसिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई केपी ओली नेतृत्वको एमालेले पुनः उम्मेदवार बनाएको छ । बादलका कारण खाली रहेको पदमा आगामी जेठ ६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
वागमती प्रदेशमा ‘अन्य समूह’ बाट पुनः चुनाव लड्न लागेका गृहमन्त्री बादलले यसअघि माओवादी र एमालेको संयुक्त मतबाट जितेका थिए । यसपालि उनी एक्लो एमालेका तर्फबाट मैदानमा खडा भएका छन् ।
जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपचुनावमा वागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखरहरुले मतदान गर्नेछन् ।
वागमती प्रदेशसभामा ११० जना सदस्य छन् । यस प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मत संख्या २३८ छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तह दुबैमा नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ । एमालेका सबै जनप्रतिनिधिले मत दिएको अवस्थामा बादल फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने निश्चित छ । ६ वर्षे कार्यकाल रहेका बादलको अब तीन वर्ष बाँकी छ ।
एमाले पार्टीभित्रको चरम अन्तरविरोधका कारण माधव नेपाल पक्षका जनप्रतिनिधिले बादललाई मत नदिई क्रस भोटिङ गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेपछि यस्तो आशंका जन्मिएको हो ।
प्रदेशसभाका कुल सदस्यमध्ये एमालेका सबैले बादललाई भोट दिएको अवस्थामा उनले ५७ मत पाउन सक्छन् । एमाले बाहेकका सबै दलको मत जोड्दा ५३ मात्रै पुग्छ । तर, विपक्षीले साझा उम्मेदवार उठाए र माधव नेपाल पक्षका ४/५ जना प्रदेश सांसदले तलमाथि गरे भने बादल अल्पमतमा पर्न सक्छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यमा काँग्रेसको २२, माओवादीको २३, विवेकशील साझाको ३, नेमकिपा र राप्रपाको २/२ मत छ भने राजपाको एक मत छ । राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको मतभार ४८ तोकिएको छ । अर्थात् एकजना मत बराबर ४८ मत गनिन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको मतभार भने प्रदेशसभा सदस्यको भन्दा निकै कम छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको मतभार १८ छ । अर्थात् प्रदेशसभा सदस्यको एक सदस्यले खसाएको मतलाई जित्न स्थानीय तहका तीनजनाको मत जोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, प्रदेशसभा सदस्यको मत निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
वागमती प्रदेशमा स्थानीय तहका २३८ जना प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पनि एमालेकै एकल बहुमत छ । २३८ मध्ये एमालेका १३३ छन् । काँग्रेस, माओवादी, लगायतका सबै विपक्षीको जोड्दा १०६ जना मात्र पुग्छन् ।
यो अवस्थामा एमालेको १३३ मत नै बादललाई पर्यो भने उनले जित्ने निश्चित छ । तर, विपक्षीले साझा उम्मेदवार दिएर एकै ठाउँमा मत खन्याएको अवस्थामा र एमालेभित्रै क्रस भोटिङ भएको अवस्थामा भने बादलमाथि चुनौती आइलाग्न सक्छ ।
तर, अहिलेसम्मको अंक गणितलाई हेर्दा सबै विपक्षीहरु मिले पनि बादलले पुनः चुनाव जित्ने सम्भावना नै प्रवल देखिएको छ । तर, माधव पक्षले धोका नदिएको अवस्थामा ।
एमालेबाट बादलको उम्मेदवारी परिसक्दा पनि काँग्रेस र माओवादीले राष्ट्रियसभाको उपचुनावबारे कुनै चासो देखाएका छैनन् । उनीहरुले एकल उम्मेदवारी दिएर जित्ने गणित छैन । तर, साझा उम्मेदवारका विषयमा पनि गृहकार्य गरेको देखिन्न । नेपाली काँग्रेस र एमालेको माधव नेपाल पक्षले साथ नदिएसम्म माओवादी केन्द्रले बादलको जितलाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । अघिल्लो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा विवेकशील साझा लगायतका साना दलले नेपाली काँग्रेसलाई साथ दिएका थिए ।